Etiquette – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on5July 2019 Categories Discussion, Etiquette1 Comment on ဖော်ပင်ဇာတ်လမ်းမှာ ကျနော်မှားသွားခဲ့ပါတယ်
နှုတ်ခွန်းဆက်ပုံနဲ့တင် မိဘကို ထိခိုက်နိုင်ပါသဗျို
သတင်းအချက်အလက်ဆိုတဲ့ ခေတ်တစ်ခုနဲ့အတူ ဆက်သွယ်ရေးပုံစံသစ်ကလည်း လူတွေကြားထဲကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဓာတ်ချောစာ (email) ဆိုတာပါပဲ။
အခုအခါမှာတော့ ရွှေမြန်မာလူငယ်တွေလည်း ဓာတ်ချောစာကို တွင်တွင် သုံးလာကြပါပြီ။ မှိုလိုပေါက်နေတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေကတစ်ဆင့် အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ကြ၊ ပြောဆိုကြ၊ စာတွေ ပေးပို့လာကြပါတယ်။ အဲဒီ့မှာ ဘာသွားတွေ့ ရသလဲဆိုတော့ မြန်မာလူငယ်အတော်များများခမျာမှာ ဓာတ်ချောစာယဉ်ကျေး မှု (ဝါ) ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကို လုံးဝနားမလည်ဘဲ ထင်သလို ရမ်းကြိတ် နေကြတာကို စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာ မြင်မြင်နေရပါတယ်။ ကျင့်ဝတ်ဆိုတာ ချိုနဲ့လားလို့ မေးရမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူလားမြောက်ခဲ့ရသူများမို့ သူတို့လေးတွေကို အပြစ်တော့ မတင်ရက်ဘူး။
တစ်ဖက်ကလည်း လူငယ်တွေဟာ တိုးတက်ကြီးပွားချင်ကြသူတွေ၊ အောင်မြင်ထွန်းပေါက်လိုသူတွေပဲဆိုတာကိုလည်း သိနေရတဲ့အခါ သူတို့တွေအတွက် ဓာတ်ချောစာ ကျင့်ဝတ်တွေကို ရေးပြချင်စိတ်က ပေါက်လာရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကျွန်တော့်သဘောတစ်ခုတည်းနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားများနဲ့ ကျကျနန ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှင်းပြချင်စိတ်ကြောင့် အဲဒီ့ရွှေအင်တာနက်ကြီးထဲမှာ ရှာလိုက်တဲ့အခါ တစ်ပုံတစ်ပင်တွေ့ရပါတယ်။ (ကိုယ်တိုင်လည်း အင်္ဂလိပ်စာ တတ်တယ်၊ ရှာလည်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်တစ်ခုခုမှာ email etiquette လို့ဖြစ်စေ၊ netiquette လို့ဖြစ်စေ ရိုက်နှိပ်ကာ ရှာဖွေကြည့်ရင် အောတိုက်အောင် တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။)
အဲဒီ့လို ရှာဖွေလို့ ရတာတွေရယ်၊ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံတွေရယ် ပေါင်းစပ်ပြီး ဓာတ်ချောစာ ကျင့်ဝတ်တွေကို အလျဉ်းသင့်သလို ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါရစေလား။
ကျောင်းတွေမှာ သင်ကြားတဲ့ မြန်မာစာမှာတော့ ပေးစာအရေးအသားရယ်လို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ထည့်သွင်းသင်ကြားခြင်း မရှိပါဘူး။ သို့ပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ ပေးစာကို စာစီစာကုံးနဲ့အတူ အလေးပေး သင်ကြားပါတယ်။ သို့ပေမင့် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ သင်ကြားနေတဲ့ စနစ်က ခေတ်နောက်ကျနေပါပြီ။ စာပိုဒ် ခွဲပုံ၊ နေ့စွဲတပ်ပုံ၊ လိပ်စာနေရာချပုံ၊ ပုဒ်ဖြတ် ပုဒ်ရပ် သင်္ကေတ ထည့်ပုံတွေဟာ ဟိုးနှစ်ပေါင်း တစ်ရာနီးပါးက စနစ်အတိုင်းသာ ကျောင်းတွေမှာ သင်ကြားဆဲပါ။
ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာက အဲဒါ မဟုတ်တာမို့ အဲဒါကို အကျယ်မပြောတော့ပါဘူး။
သို့ပေမင့် ရေးထုံးစနစ်တွေ ဘယ်လို ပြောင်းသွားသွား၊ စာတစ်စောင်မှာ ပါရှိတဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေကတော့ မပြောင်းမလဲ တည်ရှိနေပါတယ်။ စာတစ်စောင်အတွက် အရေးကြီးဆုံးက နှုတ်ခွန်းဆက်ပါ။ အရေးကြီးဆို စာတစ်စောင်ရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ အဲဒီ့စာသားကို အရင်ဆုံး ဖတ်ရလို့ပါပဲ။
လုပ်ငန်းသုံးစာတွေမှာတော့ မြန်မာလိုဆိုရင “လူကြီးမင်းခင်ဗျား/ရှင့်” ပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ Dear Sir/Madam/Ms. ပေါ့။ အဲဒါဟာ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါ။ ဓာတ်ချောစာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လက်နဲ့ရေးတဲ့စာဖြစ်ဖြစ်၊ လက်နှိပ်စက်နဲ့ ရိုက်တဲ့ စာပဲဖြစ်ဖြစ် ပေးစာမှန်သမျှမှာ အဲဒီ့ နှုတ်ခွန်းဆက်ကို မဖြစ်မနေ ထည့်ရပါတယ်။
သည်နေရာမှာ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ (စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးတဲ့) သာမန်ပေးစာလောက် ဓာတ်ချောစာက သိပ်ပြီး ခန့်ညား ထည်ဝါစရာမလိုဘူး မဟုတ်လား။ ပိုပြီး ရင်းနှီးရာ မရောက်ပေဘူးလားလို့ပေါ့။ အဲသလို မေးရင် မှန်ပါတယ်လို့သာ ဖြေရမှာပါ။ ဓာတ်ချောစာသည် ပေးစာလိုမျိုး သိပ်ပြီး သမားရိုးကျ မဆန်တော့တာ မှန်ပေမယ့် တစ်ဖက်ကလည်း မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းချင်း ပေးတဲ့စာမျိုးမှာတောင် “ဟေ့ကောင်ကြီး… နေကောင်းရဲ့လား”ဆိုတာမျိုးနဲ့ အစချီ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုပဲ ဓာတ်ချောစာမှာလည်း သူ့နည်းနဲ့သူ၊ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အနေအထားအလိုက် နှုတ်ခွန်းဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ မမေ့သင့်ဘူး။
သည်နေရာမှာ “ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေအထား”ဆိုတဲ့စကားရပ်ဟာ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် လူတကာကို “အစ်ကို”လို့ ခေါ်တာဟာ ယဉ်ကျေးရာ ရောက်ပေမယ့် တချို့လူတွေကျတော့ အဲဒီ့လို အစ်ကိုလို့ ခေါ်တာကို မကြိုက်ဘဲ “ဆရာဦးဘယ်သူ”လို့ ခေါ်မှ ကြိုက်တတ်သူတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆရာမလို့ ခေါ်တာကိုမကြိုက်ဘဲ “မမ”လို့ ခေါ်မှ သဘောကျနိုင်သူ မိန်းမသားတွေလည်း ရှိနိုင်ပြန်တယ်။ သည်အတွက် လူတိုင်းကို ကိုယ့်စိတ်နဲ့ နှိုင်းပြီး ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲမိရင် အမှားကြီး မှားသွားနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဓာတ်ချောစာရေးမှာတော့ ဟုတ်တယ်၊ သို့သော် လုပ်ငန်း သဘောအရ တရားဝင်ဆက်သွယ်တာ၊ အသိပေးတာမျိုးမှာ ဓာတ်ချောစာကို သုံးပြီဆိုရင် ပိုလို့တောင် သတိထားသင့်ပါတယ်။ လူသားအရင်းအမြစ်ဌာနက စီမံခန့်ခွဲရေးမှူးတစ်ယောက် ပြောဖူးတဲ့ စကားတစ်ခုက တော်တော်တာသွားတယ်။ သူ့ဆီကို ဓာတ်ချောစာနဲ့ အလုပ်လျှောက်လွှာတွေ တင်ကြတဲ့အထဲမှာ တစ်ယောက်က “ဦးခင်ဗျား”လို့ အစချီထားတာကို တွေ့လိုက်တာနဲ့တင် အဲဒီ့ လျှောက်လွှာကို ဆက်မဖတ်တော့ဘဲ ပယ်လိုက်ပါသတဲ့။ တချို့ကတော့ ဘာ မဟုတ်တာလေးနဲ့ ပယ်တယ်လို့ အောက်မေ့ကြပေမယ့် သူကတော့ သည်လို လူမျိုးဟာ သူ လျှောက်ထားမယ့် အလုပ်နဲ့ မသင့်တော်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းရင်းက စီမံခန့်ခွဲရေးမှူးဟာ မိန်းမသားတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါကို ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ “ဦးခင်ဗျား”လို့ အစချီထားတဲ့အတွက် လျှောက်ထားသူသည် သည်လိုအလုပ်မျိုးတွေကို ယောက်ျားတွေသာ လုပ်လိမ့်မယ်၊ လုပ်ထိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အစွဲမျိုး ကြီးမားလှသူလို့ သူ ယူဆလိုက်ပါသတဲ့။ လူအများနဲ့ ဆက်ဆံရမယ့် ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာ ကျား-မခွဲခြားလိုစိတ် သိပ်ပြင်းနေရင် ဘယ်လိုမှ မသင့်လျော်တဲ့အတွက် အဲဒီ့ စီမံခန့်ခွဲရေးမှူးက အဲဒီ့ နှုတ်ခွန်းဆက်လေးနဲ့တင် အဲဒီ့လူကို ပယ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ (ရည်ညွှန်း – Comments by Andy Lester, 8 February 2005 at http://geeketiquette.com/archives/2005/02/08/email-etiquette-1-greetings/)
အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ “ဦးခင်ဗျား”ဆိုတာကDear Sir ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်းDear Mr. HR Manager ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အကင်းပါးသူသာ ဆိုရင်တော့ အဲဒီ့နေရာတွေမှာDear Sir/Madam/Ms. လို့ဖြစ်စေ၊ Mr./Ms. HR Manager လို့ဖြစ်စေ မျဉ်းစောင်းလေးတွေခံ ပြီး ရေးသွားမှာပါ။
သည်ဥပမာနဲ့တင် နှုတ်ခွန်းဆက်က ဘယ်လောက် စကားပြောသလဲဆိုတာ အင်မတန် ထင်ရှားပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဆီလာတဲ့ ဓာတ်ချောစာအများစုမှာတော့ အဲဒါတွေ တစ်ခုမှ မပါတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတာတွေခင်ဗျ။ ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်လာတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်များဟာ ကျွန်တော့်စာတွေကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို သားချင်းတစ်ယောက်လို ရင်းနှီးနေမယ်ဆိုတာ သံသယမဖြစ် မိပါဘူး။ သို့ပေမယ့် နှုတ်ခွန်းဆက် လုံးဝ ပါမလာတဲ့ စာကို ဖတ်ရတာကတော့ တော်တော့်ကို အောင့်သက်သက်နိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်ချောစာမှာ အဲသလို Dear Sir လိုမျိုးနဲ့ သိပ်ကြီး ခမ်းနားဖို့ မလိုတာ မှန်ပေမယ့် အဖျင်းဆုံးတော့ ဦးဘခန့်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဆီကို ရေးတဲ့အခါ မှာအနည်းဆုံးတော့ Hello/Hi U Ba Khant လောက်တော့ ထည့်သင့်ပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ ဘခန့်ဆိုတာ ကလောင်အမည် (ဒါမှမဟုတ် အနုပညာ အမည်) ဖြစ်နေပြီး သူ့အမည်ရင်းကို ကိုယ်က မသိဘူးဆိုလည်း အခုမှစပြီး မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ စာရေးရာမှာ သူ့ကို ကိုယ့်စိတ်ထဲက ဘယ်လောက်ကြီး ရင်းနှီးနေနေ “ဦး/ဒေါ်/ကို/မ”လေးလောက်၊ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလည်း Mr./Ms. လေးလောက်တော့ တပ်သင့်ပါတယ်။ ဟာ… ဒါကတော့ အနုပညာနာမည်ပဲ ဆိုပြီး မင်းသား ကျော်ရဲအောင်ဆီ ပထမဆုံးဓာတ်ချောစာ ရေးပြီး မိတ်ဆက်တဲ့ အခါ “ဟေ့… သူငယ်ချင်း ကျော်ရဲအောင်”လို့ မရေးကောင်းမှန်းလောက်တောင် မြန်မာလူငယ်တချို့ မသိကြတော့တာကို ကျွန်တော့်ဆီ လာတဲ့ စာတွေအရ သတိထားမိနေပါတယ်။ လာကတည်းက “သူငယ်ချင်း အတ္တကျော်”တို့၊ “ဟေ့… ဆူဒိုနင်”တို့ ဆိုတာတွေနဲ့ တွေ့တွေ့နေရလို့ ပြောတာပါ။
ကျွန်တော့်ဘက်ကတော့ သြော်… ငါကိုက လမ်းဖွင့်ပေးထားမိတာပဲလေ၊ ကနေ့လူငယ်တွေခမျာ ရိုသေတာကိုသာ အသင်ခံခဲ့ရရှာပြီး လေးစားမှုကို ဘယ်သူကမှ သင်မပေးခဲ့ကြတာမို့ အဲလို ရုန့်ရင်းနေကြတာပဲလေဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ မနည်းသည်းခံပြီး သူတို့စာတွေကို ပြန်ပြန်ပေးနေရပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ဟို စီမံခန့်ခွဲရေးမှူးလိုပဲ အဲဒီ့စာမျိုးတွေကို ဆက်မဖတ်ဘဲ ထားရတော့မလိုသာ ဖြစ်သွားမှာပါ။
တချို့မိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေကတော့ “ဆရာခင်ဗျ/ရှင့်”ဆိုတာမျိုး နဲ့ အစချီပါတယ်။ ဆိုက္ကားနင်းတဲ့သူကိုတောင် ဆိုက္ကားဆရာ၊ ကားမောင်းတဲ့သူကိုလည်း ကားဆရာစသဖြင့် ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာစွာ ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းတတ်ကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးများအနေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဆရာခေါ်လှာတာ ဘာမှ မာန်တက်စရာ မလိုပါဘူး။ သို့သော် ဒါတွေက မိကောင်းဖခင်သားသမီးဖြစ်ကြောင်း ပြဆိုရာ ရောက်ပါတယ်။ တချို့ကျပြန်တော့လည်း “ဦးခင်ဗျား”ဆိုတာမျိုး ပါပါတယ်။ ဘူးလုံးနားမထွင်းတချို့ကတော့ “အစ်ကို”တဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါမျိုးကို ထိုက်သင့်တဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးက “မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ/ရှင့်”လို့ အစချီတာမျိုးပါ။ ဒါလည်း အင်မတန်မှ မိကောင်းဖခင် သားသမီး ပီသပါတယ်။ အသက် ၃၀ ကျော်တစ်ယောက် ကျွန်တော့်ဆီ စာရေးတဲ့အခါ အစချီနှုတ်ခွန်းဆက်ပုံကတော့ လှတယ်။ “ဆူဒိုနင်”တဲ့ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့မိဘတွေကိုပဲ ရိုးမယ်ဖွဲ့လိုက်မိရပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ သူက မွေးလာမယ့် သားသမီးတွေအတွက်လည်း ရင်လေးမိတယ်။
မြန်မာလို နှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့အထဲမှာ “နေကောင်းပါသလား ဦးဆူဒိုနင်”ဆိုတာမျိုးလည်း ကြုံဖူးပါတယ်။ ဒါလည်း မိကောင်းဖခင်သားသမီးဆန်တဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်နည်းပါပဲ။
အင်္ဂလိပ်လို ရေးမယ်ဆိုရင် လည်းDear + Title + Surname, Dear + First Name, Hi + First Name, First Name, Hi (and variants) စသဖြင့် အသီးသီး ရေးသားနိုင်ကြပါတယ်။ ပထမဆုံးက Title ဆိုရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်ပုဒ်အရ “ဦး/ဒေါ်/ကို/မ/ဆရာ/ဗိုလ်ကြီး/ဒေါက်တာ” အစရှိတာများကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Surname က ခရစ်ယာန်နာမည်နှစ်လုံးမှာ နောက်ဆုံး နာမည်ကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Brad Pitt မှာ surname က Pitt ပါ။ Kate Winslet မှာ surname က Winslet ပါ။ မရင်းနှီးတဲ့အတွက် သူတို့ဆီ စ စာရေးရာမှာDear Mr. Pitt/Ms. Winslet လို့ ရေးမှ တော်ပါမယ်။ သူတို့နဲ့ အတော် ရင်းနှီးလာပြီဆိုမှ Dear Brad/Kate လုပ်လို့ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီ့ထက် ပိုပြီး ရင်းနှီးလာတဲ့အခါ Hi Brad/Kate လုပ်လို့ရပါပြီ။ သူ့အိမ်ကိုယ့်အိမ် ဝင် ထွက်ရင်းနှီးတဲ့အဆင့် ပခုံးဖက် ပေါင်းတဲ့အဆင့်ရောက်တော့မှ ကျန်တာတွေ သုံးရမှာပါ။
အဲတော့ ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကနေ့ ရွှေမြန်မာလူငယ်တွေ တွင်တွင် သုံးနေကြတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က စာတွေပို့တဲ့အခါ၊ ချက်တင် ဝင်တယ်ဆိုပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆက်သွယ်ကြတဲ့အခါတွေမှာလည်း လူနဲ့လူချင်း စတင် နှုတ်ခွန်းဆက်ပုံပေါ်မှာလိုက်ပြီး ကိုယ်ဟာ “မိကောင်းဖခင်သားသမီးလား၊” “မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ”လားဆိုတာကို ပေါ်လွင်သွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်း တစေ့တစောင်း တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြောနေကျ စကားနဲ့ပဲ နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။ ကျွန်တော်ပြောတိုင်း လက်ခံရမယ်လို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မတိုက်တွန်းအပ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာကို ကိုယ်ပိုင် ဦးနှောက်နဲ့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး လက်ခံသင့်တယ်ထင်မှ လက်ခံပါ၊ ကျင့်သုံးသင့်တယ် ထင်မှ ကျင့်သုံးပါ။
ကိုယ့်ကာယကံ ကိုယ့်ဝစီကံ စီမံတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ခံကြရမှာကိုတော့ သတိလေးထားစေချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော် ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ ဘုရားဟောတာလေ၊ ဘာတဲ့… “သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ”ဆိုသမှုတ်လားဗျာ။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထုတ် သရဖူမဂ္ဂဇင်းပါ စာမူကို ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်တာပါ။
Author lettwebawPosted on 13 November 2012 Categories Discussion, Etiquette3 Comments on The importance of salutations